सरकारसँग दुई बुँदे सहमति गर्दै गंगामायाले तोडिन् अनसन !, के छ दुई बुँदामा ?::Pathivara News
सरकारसँग दुई बुँदे सहमति गर्दै गंगामायाले तोडिन् अनसन !, के छ दुई बुँदामा ?
काठमाडौं । जेठ १५ देखि अनसनमा बसेकी गंगामाया अधिकारीले अनसन स्थगित गरेकी छन् ।
सरकारसँग दुई बुँदे सहमति गरेपछि अधिकारीले शुक्रबार आफ्नो अनसन स्थगित गरेकी हुन् । उनलाई राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले जुस खुवाएर अनसन तोडाएका थिए ।
उनका पति नन्दप्रसादको अनशनकै क्रममा मृत्यु भएको थियो । उनका छोरा कृष्णप्रसादको तत्कालीन विद्रोही माओवादीले हत्या गरेका थिए । हत्याका मुख्य अभियुक्त भनिएका रुद्र आचार्य भने बेलायतमा लुकेर बसेका छन् । उनलाई प्रहरीले डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको छ ।
उनले कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले हस्ताक्षर गरेको दुई बुँदे पत्र दिइएपछि अनसन तोड्न राजी भएकी थिइन् ।
गंगामायाले यो १० दिनमा केही प्रगति भएन भने फेरि अनसन बस्ने चेतावनी पनि दिएकी छन् ।
के छ दुई बुँदामा ?
पत्रमा २०७२ असोजमा जनाएको पाँच बुँदे प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । त्यसको अनुगमन गरी प्रतिवेदन बनाउन सरकार र गंगामायाले तोकेको प्रतिनिधि रहेको अनुगमन समिति बनाउने पनि पत्रमा उल्लेख छ ।